EditShare QScan အလိုအလျောက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြန့်ချိမှုက Creative Content များကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး Ingest မှ Delivery မှတဆင့်လိုက်နာသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare QScan Automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဖြန့်ချိပို့ဆောင်မှုမှတဆင့်စားသုံးမိရာမှစစ်ဆေးမှုနှင့်ကိုက်ညီအတွက်ကို Creative အကြောင်းအရာသိမ်းထားပြီး
EditShare QScan Automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဖြန့်ချိပို့ဆောင်မှုမှတဆင့်စားသုံးမိရာမှစစ်ဆေးမှုနှင့်ကိုက်ညီအတွက်ကို Creative အကြောင်းအရာသိမ်းထားပြီး
အလွန်အမင်းထိုးထွင်းသိမြင်, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုပတ်ရစ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ-ပထမဦးဆုံးအကြောင်းအရာစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းမှာလိုက်နာမှုနှင့်သမာဓိရှိဘို့မီဒီယာဖိုင်စစ်ဆေးခြင်းဗီဒီယိုပညာရှင်များကို enable; IBC2019 မှာမိတ်ဆက်ပြသ
ဘော်စတွန်, MA - စက်တင်ဘာလ 4, 2019 - EditShare®တစ်ဦးကနည်းပညာပူးပေါင်းအထူးပြုကြောင်းခေါင်းဆောင်, လုံခြုံရေးနှင့်မီဒီယာဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသိဉာဏ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်, IBC2019 မှာ QScan, (7.A35 ရပ်) နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-ပထမဦးဆုံးအကြောင်းအရာစမ်းသပ်စွမ်းရည်နှင့်တကွ, ၎င်း၏ software ကို-based automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက် (AQC) ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတခုအဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ ညာဘက် Dolby Vision ၏ရန်မှတဆင့်ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံမှာထံမှ IMF က packages များနှင့်အသံကျယ်လောင်ဖို့အရာအားလုံးအပေါ်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးမှုများကို run ဗီဒီယိုပညာရှင်များကို Enable ™ HDR ကိုလိုက်နာမှုနှင့်စိစစ်အတည်ပြု, အ အသစ်က QScan update ကိုယခုမှပြုလုပ်ရန်ဆက်သွယ် EditShare EFS နဲ shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ကသိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူအသုံးပြုသူများဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မဆိုမှတ်ကာလအတွင်းမီဒီယာဖိုင်များကိုပြည့်စုံစမ်းသပ်ခြင်းအလိုအလျောက်ရန်အဘို့အအောင်၎င်း၏အမာခံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာအပေါ်ချဲ့ထွင်။
"မီဒီယာဖြန့်ဖြူးပစ်မှတ်၏နံပါတ်နှင့်မတူကွဲပြားမှုအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာမှုနှင့်အတူ, ဖိုင်လိုက်နာမှုအစဉ်အဆက်ထက် ပို. အရေးကြီးပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, သင်၏ဖိုင်များကိုလိုက်နာမှုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သေချာကြောင်း AQC ဖြစ်စဉ်ကိုစမ်းသပ်ပုံစံများကို configure နှင့်ရလဒ်များကိုကိုဖတ်နိုင်သူအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကစီမံကိန်းကို၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်စဉ်အတွင်းပြေး။ ဒီအလိုတော်အလံအမှားအယွင်းများနေစဉ်နှင့်မကောင်းတဲ့ file ကိုလက်ချွတ်တားဆီး, ကအမှားသင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု၏အစအဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အထိရောက်ဘူး။ သငျသညျပျက်ပြယ်နှင့်သင့်စီမံကိန်း၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုထပ်မံဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအလွန်အချိန်စားသုံးခြင်းနှင့်အဘိုးထိုက်သောအမှား, " Sunil Mudholkar, ထုတ်ကုန်၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကဤသို့ဆို၏, EditShare. "Qscan တစ်ခုအယ်ဒီတာ, colorist နှင့်အတူ, ကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်ပင်လက်ထောက်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံချွေတာ, သူတို့ကပေါ်လာအမှတ်မှာကိစ္စများဖမ်း, ဖိုင်ရဲ့ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဖိုင်ကိုသမာဓိရှိစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ "
IBC2019 မှာပြသနယူး QScan features တွေနဲ့စွမ်းရည်များပါဝင်သည်:
QScan ယခုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုမြန်သင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေအားလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ခြင်းပြီးနောက်ဖိုင်တစ်ဖိုင်မှကိုဖန်ဆင်းပြောင်းလဲမှုများန်းကျင်အခြေအနေတွင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့, ဖန်တီးမှုများဖိုင်ကိုပေးပို့ဘို့အဆင်သင့်ကြောင်းကိုအတည်ပြုသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကို minimize နိုင်ကြသည်။ တစ်တစ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများမူရင်းနှိုင်းယှဉ်ဖိုင်ကိုစေခဲ့သည်ဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်; အချိန်ဇယားအမြင်လည်းအပြောင်းအလဲဖိုင်ကိုစေသောအခါပေါ်အပိုဆောင်းစကားစပ်ပေးသည်။ အစဉ်အဆက်-တင်းကျပ်သတ်မှတ်ရက်များနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအလှည့်စီမံကိန်းများကိုနှင့်အတူ, QScan နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်, ဖန်တီးမှုများယုံကြည်မှုနှင့်အတူနောက်ဆုံးစီမံကိန်းများကိုချွတ်လက်ကူညီပေးသည်။
အတူ native ပေါင်းစည်းမှု EditShare EFS နဲမီဒီယာ Spaces:
လုပ်ငန်းအသွားအလာရုံပိုမိုလွယ်ကူတစ်ခုလုံးအများကြီးရတယ်! QScan ပြုလုပ်ရန်နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည် EditShare EFS နဲမီဒီယာ Spaces ။ ဒါဟာ EFS နဲမီဒီယာအင်ဂျင်နီယာ node ကိုအပေါ်တည်ရှိသောတပ်မက်လိုချင်သောအစီမံကိန်းကိုအာကာသကနေတိုက်ရိုက်ဆွဲခြင်းနှင့် AQC အကြောင်းအရာနိုင်ပါတယ်။ QScan အစီရင်ခံစာများအကြောင်းအရာလိုချင်သော AAQC settings ကိုလွန်လျှင်အတည်ပြု, တူညီတဲ့စီမံကိန်းကိုအာကာသမှပြန်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာစားသုံးမိ, audio အယ်ဒီတာအဖွဲ့, vfx, ဂမ်နှင့် EFS နဲမီဒီယာ-သတိထား node ကိုအပေါ်တည်ရှိပါတယ်စီမံကိန်းထွက်ခွာအကြောင်းအရာမရှိဘဲအားလုံးပြီးသွားထံမှတိုင်းအဆင့်မှာ check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အသစ်လျင်မြန်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း option ကိုဖွင့်တဲ့ Pre-ဒီဇိုင်း template ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင် (သို့မဟုတ်မျိုးစုံဖိုင်များ) ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစတင်ရန်အသုံးပြုသူနိုင်ပါတယ်။ ထို option နေဆဲတည်ရှိပေမယ့်ခြေလှမ်းများဖျက်သိမ်းရေးအသုံးပြုပုံပထမဦးဆုံးအသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မလိုအပ်လျက်ရှိ၏။ အသုံးပြုသူ (s) ကိုတစ်ဦး template ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် file ပြီးတာနဲ့အသစ်တခု "လျင်မြန်စွာအားသုံးသပ်ခြင်းစီမံကိန်း" ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားရွေးချယ်ထား template ကိုထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအကျိုးရှိစွာမြန်ဆန်င်နှင့်သင့်ဖိုင်တွေ၏သမာဓိအပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးစွမ်းသည်။
ပရိသတ်တွေရှည်လျားကြော်ငြာများ၏ရုတ်တရက်ကျယ်လောင်ကိုမကျေနပ်သောကြောင့်ပါပြီ။ အမေရိကန်မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်အက်ဥပဒေမီနှင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပရိုဂရမ်းမင်းကဲ့သို့တူညီသောအသံအတိုးအကျယ်အဆင့်မှာကြော်ငြာထုတ်လွှင့်ဖို့ကွန်ယက်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အလားတူဥရောပအတွက် EBU R ကို 128 အသံကျယ်ပုံမှန်များအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်နဲ့ audio အချက်ပြမှုများ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိခွင့်ပြု။ သော်လည်း QScan အမြဲကျယ်လောင်စစ်ဆေးနေပေးထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအတွက်အသုံးပြုသူများယခုထုတ်လွှင့်အလွယ်တကူဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းများလိုက်နာကူညီပေးနေတစ်ဦးအသံကျယ်တိုင်းတာဘို့ offset ကို select နိုင်ပါလိမ့်မည်
အသစ်ပေမဲ့အသံအဆင့်အင်္ဂါရပ် အော်ဒီယိုချန်နယ်နှုန်းရုံတစျခုရဲ့တန်ဖိုးကိုပေးတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်ဖြတ်ပြီးအသံအဆင့်၏ပျမ်းမျှတွေ့။ အဆိုပါအသုံးပြုသူစတီရီယိုအသံ file ကိုမှန်ကန်စွာပေးပို့ဘို့တည်နေသည်သေချာ, တံခါးခုံကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာနှိုင်းယှဉ်ဖို့အဘယ်အရာကို channel များကိုရွေးနိုင်သည်။
OpenEXR နှင့် TIFF ပာများအတွက်ပံ့ပိုးမှု:
OpenEXR, စက်မှုအလင်း & Magic အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး open-source က high-dynamic-range ကို image file ကို format ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု VFX အဆောက်အဦများအတွက်လိုက်နာမှုစမ်းသပ်ခြင်းစွမ်းရည်ချဲ့ထွင်။ OpenEXR ဖိုင်များ, အရည်အသွေးမြင့်, Multi-နက်ရှိုင်းပုံရိပ်တွေသိုလှောင် Lossless သို့မဟုတ် lossy compression ၏ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးမျိုးစုံအလွှာကိုထောကျပံ့များနှင့်မြင့်မားတောက်ပအကွာအဝေးနှင့်အရောင်ကိုင်ထားပါ။ QScan နှင့်အတူ, VFX အဆောက်အအလွယ်တကူ OpenEXR ဖိုင်တွေလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။
DCP အထုပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သော display:
အစဉ်အလာရုပ်ရှင်မှဆန့်ကျင်အဖြစ်ယနေ့တွင်အများအပြားစတူဒီယိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအထုပ်များမှတဆင့်ဒေသခံရုပ်ရှင်ရုံမှအကြောင်းအရာများဖြန့်ဝေ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအထုပ်များသဘာဝတွင်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, IMF က packages များဆင်တူတဲ့အမြင်အာရုံသစ်ပင်ဇယားတွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ QScan ရဲ့အသစ်အမြင်အာရုံ interface ကိုအလွယ်တကူဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအထုပ်များပါဝင်ကြောင်း key ကိုဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်လျင်မြန်စွာမှန်ကန်သောကြောင့်အတည်ပြုရန်အသုံးပြုသူများအဖွ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအသံ, ပုံရိပ်နှင့်ဒေတာစီးဆင်းမှုဖိုင်တွေ ကချိတ်ဆက်ခြင်းအပြောင်းအလဲဘို့အချိန်အခါပေးထားသော DCP ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။
ဆိုက်ကားက XML ဖိုင်များမှ Dolby Vision ၏ HDR ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ:
Dolby Vision ၏အဘို့ HDR Workflows, QScan ယခုတိုက်ရိုက်ဆိုက်ကားက XML ဖိုင်များကိုဖတ်တယ်။ အဘယ်သူမျှမရှည်အသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲတွင် HDR သတင်းအချက်အလက် embed လုပ်ဖို့ရှိပါဘူး။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်ဆိုက်ကား XML ကိုစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးအားလုံးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွား; HDR ကိုဒေတာသာ J2K အတွက် Dolby Vision ၏ဖိုင်နောက်ဆုံးပေးပို့အပေါ်သို့ embedded ဖြစ်ပါတယ်။
GrayMeta Iris ကရည်ညွှန်းကစားသမားနှင့်အတူပေါင်းစည်းရေး:
ဒါဟာ QScan ကနေစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကို ယူ. ရည်ညွှန်းကစားသမားပလက်ဖောင်း Graymeta Iris ကအတူ Real-time မှာသူတို့ကိုမြင်ယောင်ယခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ QScan အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှားယွင်းမှုများအတွက် Iris ကအချိန်ဇယားမှာပြနေကြသည်နှင့်သူတို့၏ပြင်းထန်မှုအားဖြင့်အဆင့်နိုင်ပါသည်။
IBC2019 မှတက်ရောက် (ကသရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်www.editshare.com/ibc-2019) ၏နောက်ဆုံး version ကိုကြည့်ဖို့ EditShare အဆိုပါ EFS နဲ 2020 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် running QScan သိုလှောင်မှု shared နှင့်တင်းကျပ်စွာနှင့်ဆက်စပ် Flow 2020 မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ။
EditShare ကွန်ရက်ကိုမျှဝေရန်သိုလှောင်မှုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှု, တီဗီ, အားကစားနှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စမတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဲထုတ်ကုန်ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပူးပေါင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သူတို့ကစားသုံးမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, high-performance ကိုဗဟိုက Shared သိမ်းဆည်းခြင်း, AQC, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား software ကို, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်တစ်ခုသူဟာ Emmy ဆုရ Non-linear ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လျှောက်လွှာများပါဝင်သည်။
2015 Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC IBC စွဲငြိဖွယ်ရာ ပေါင်းစည်းမှု isovideo JCT-VC ကို မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows စာတန်းထိုး ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2019-09-04
ယခင်: IBC မှာ Miller ကမိတ်ဆက် CiNX, ရုပ်ရှင်ရုံအရည်ခေါင်းဆောင်များ၏နယူးလိုင်း,
နောက်တစ်ခု: MTE2019: Brightline ဒီမိုနယူး cMe2 Huddle ROOM တွင်အလင်း